Ikhaya / Blog / Ngubani othi Amagumbi okuhlambela amancinci awanakuba sisiphelo esiphakamileyo? Iindlela ezili-11 zokwenza ukuba zibe nkulu kwaye zibe ntle ngakumbi
2021 / 09 / 18 uhleloBlog 540 0
Ungayihombisa njani igumbi lokuhlambela elinamaxabiso aphezulu kunye nendawo encinci? Akululanga ukufaka izinto zangasese, iikhabhathi zangasese, iisinki, iishawari kwigumbi lokuhlambela, kungasathethwa ke ngokuthetha ngantoni? Ngapha koko, ayisiyiyo, ukuba nje uyilo lobuqili lweemveliso zakho zangasese, igumbi lokuhlambela alinakubonakala kuphela ukuba liphezulu kakhulu kodwa linokusebenza ngokupheleleyo, unokufumana indawo ekhululekileyo ngakumbi.
Ukutshintsha indawo yangasese
Shenxisa indlu yangasese kwindawo yayo yesiqhelo embindini uye kunxantathu “olityelweyo” kwigumbi lokuhlambela. Yikhumbule xa usendlini yangasese, ulibale xa uxakekile, kwaye wandise indawo ekhoyo kwigumbi lakho lokuhlambela. Ngale ndlela akusayi kubakho zintloni apho indlu yangasese "ingamehlo" okanye "isikhubekiso".
Ukuba uziva ngathi isinki somgangatho yindawo enkulu kakhulu, zama ukumisela isinki ebekwe eludongeni. Ukulinganisa udonga lwe-180 ° okanye i-90 ° eludongeni i-engile, ngokwaphula imilo embhoxo yemveli.
Unokukhetha umzimba omile okwe fan okanye uxande ohambelana nesithuba, nenkqubo yokuhambisa eludongeni eyakhelweyo. Ibhanti encinci kunye nezinto ezintsha zibonakala zilula kwaye zithintelwe. Le ndlu yangasese ibonakala intsha kwaye iyila.
Kwindawo encinci yegumbi lokuhlambela, ubeko olubekwe eludongeni lukwalungele neepompo. Ukusetyenziswa okuxhaphakileyo kwabantu kwigumbi lokuhlambela emini yimpompo, ke indawo ekhoyo ejikeleze isitya setephu ibaluleke kakhulu. Ukufaka iipompo ezixhonywe eludongeni kuya konga indawo kwaye kwenze igumbi lokuhlambela libukeke lide kakhulu ukongeza ekugcineni indawo.
Yandisa ikhabhathi yangasese
Ukuba unciphisa ubungakanani bekhabhathi yokuhlambela, iya kunciphisa ukusebenza kwayo, ke unokubeka njani ikhabhathi yokuhlambela kwindawo encinci? Impendulo yile - ukuyandisa. Ukuphuhliswa okuyimvelaphi okuthe tye kwemilo kuphuhliso oluthe nkqo. Kuphakame ngokukhanya okumhlophe okuphezulu kunye nokubhitya okuxhonywe eludongeni, yiyo loo nto kukhutshwa indawo yokuhlambela. Uhlobo lwayo luphezulu kwaye lwanamhlanje.
Ikhabhathi yekhabhinethi yokuhlambela
Ukufaka isipili kumphezulu wekhabhathi yokuhlambela kufanelekile ekwandiseni indawo kwigumbi lokuhlambela elincinci. Ngenxa yokuba badibanisa imisebenzi emibini, abagcini nje kuphela indawo kunye neendleko zokufaka isipili, kodwa basebenzise umgaqo wokubonisela ukwandisa ukubonwa kwendawo yonke yokuhlambela.
Umdibaniso weyunithi yomzimba
Dibanisa iimveliso ezahlukeneyo zangasese ezinjengezindlu zangasese, iisinki kunye neekhabhathi zangasese ndawonye ukwenza iyunithi yonke. Olu lukhetho olukhulu kumagumbi okuhlambela amancinci kwaye yinto eyandayo kubomi basezidolophini eYurophu naseMelika namhlanje.
Itanki yamanzi yendlu yangasese ifakwe kwigumbi lokuhlambela. Amanzi avela kwisinki ephezulu agcinwa etankini. Icwecwe ngobungakanani kwaye ilula ngesitayile. Oku akukhululi kakhulu indawo, kodwa kukwaphucula ukusebenza kakuhle kwamanzi, okuluhlaza kunye nokusingqongileyo.
Igumbi lokuhlambela usebenzisa i-quadrant engenasiseko
Njengendawo encinci, ezimeleyo kwigumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlambela elingacwangciswanga lingenza igumbi lokuhlambela likhangeleke lixinekile kwaye lixinekile. Ukhetho oluthandwayo namhlanje kukusebenzisa ikona okanye indawo egobileyo kwigumbi lokuhlambela. Ukufaka ishawa kunye nomda wesakhelo ongacacanga okanye ngaphandle kwesakhelo sesakhelo kunokunciphisa ukuzimela kweshawa kwaye kuyenze idibane nendawo yokuhlambela ngokwembono.
Sebenzisa izikrini zeshawari endaweni yamakhethini eshawa
Kwigumbi lokuhlambela elinendawo encinci, abantu bahlala befumana amakhethini eshawa efanelekileyo yokusebenzisa kunye nokugubungela indawo encinci. Ngapha koko, amakhethini eshawa anokuqhekeza ukuthembeka kwendawo kwaye enze igumbi lokuhlambela likhangeleke njenge-claustrophobic kunye ne-bulky. Iscreen seshawa endaweni yekhethini yokuhlamba ikwayinto ekhethwayo namhlanje. Iscreen seshawa sinokuhlukanisa nje indawo ezimanzi nezomileyo, kodwa ikwavumela ukukhanya ukuba kwandiswe kwaye igumbi lokuhlambela liphela liqaqambe kwaye libanzi.
Ukufaka iladi yereyitha ethe nkqo
Isilinganisi seladi ethe nkqo sihambisa indawo kwindawo yokuhlambela phezulu nasezantsi kunokuba sandise ngasekhohlo nasekunene, ngenxa yoko ithande ukugcina indawo eninzi kunoyilo oluthe tyaba okanye olugobileyo. Ukongeza, ireyitha eshushu yeladi igcina iitawuli zifudumele kwaye zikhululekile. Kuya kuba lula ngakumbi xa ukhupha iitawuli.
Khanyisa umbala wegumbi lokuhlambela
Amagumbi okuhlambela amancinci amancinci akafanelekanga kwaye asebenzise imibala emininzi. Imibala emininzi exubeneyo iya kwenza indawo ibonakale imdaka kwaye icinene, ke kungcono ukusebenzisa imibala eqinileyo kwiskimu sombala wegumbi lokuhlambela. Sebenzisa imibala emhlophe okanye eluhlaza okwesibhakabhaka eludongeni ukomeleza ukukhanya kwigumbi lokuhlambela. Umgangatho onemibala emnyama unokuvelisa isiphumo esomeleleyo sokuthelekisa kunye neendonga kunye nokwandisa imeko yendawo kwindawo yonke yangasese.
Yandisa umphumo wombono wethayile
Indawo yokuhlambela encinci ayifanelekanga ukusebenzisa iithayile ezinkulu. Endaweni yoko, ungasebenzisa iithayile ezinobungakanani obuncinci eludongeni lokuhlambela ukwandisa umgca othe tyaba, usenza ukuba indawo ibonakale inde kwaye ivulekile, kwaye ngenkalipho usebenzise imigca ethe nkqo ukwenza igumbi lokuhlambela libukeke liphezulu. Iziphumo ezibonakalayo zomphezulu weethayile zibalulekile okwangoku, kwaye umphezulu omenyezelayo omhlophe kunokwenzeka ukuba wandise umbono wesiphumo sezithuba.
Ngaphambili :: Ngaba ukukhanyisa kwigumbi lakho lokuhlambela kunesitayile esaneleyo? next: Izakhiwo ezi-6 eziDumileyo ezinokuthi zisetyenziswe nakweliphi na igumbi lokuhlambela ukusukela nge-3-9m2. Xa Abamelwane Bajonge, Bonke bafuna ukuLudiliza udonga baphinde bafake kwakhona!